आइसोलेसनको समस्या छ? नेक आउनुहोस् – Health Post Nepal
आइसोलेसनको समस्या छ? नेक आउनुहोस्
२०७८ जेठ ७ गते १९:११
के तपाईं कोभिडपीडित हुनुहुन्छ? घर वा कोठामा बस्ने उपयुक्त वातावरण छैन? यदि त्यस्तो समस्या हो भने यस्ता समस्या भएकाहरुका लागि उपयुक्त हुनसक्छ भक्तपुरको चाँंगुनारायण नगरपालिका दुवाकोटस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) भक्तपुरको आइसोलेसन केन्द्र ।
यहाँं अहिले ४३ पुरुष र सात जना महिलाका लागि वेड खाली छ।
कलेजका प्रिन्सिपल प्राडा हरिकृष्ण श्रेष्ठ आवश्यक परेमा आइसोलेसन केन्द्रमा डाक्टर र नर्सको प्रबन्ध पनि भएको बताए।
चाँंगुनारायण अस्पतालसँंग सयोजन गरी चाँंगुनारायण नगरपालिकाबाट आइसोलेसन सन्चालित रहेको उनले जनाए।
नेक आइसोलेसन केन्द्रमा जोसुकै पीडितले सम्पर्क गर्न सकिने उनले जनाए। बिरामीका लागि अक्सिजन तथा खाना खाजाको पनि निःशुल्क व्यवस्था रहेको उनले जनाए।
पहिलो पटक चाँंगुनारायण नगरपालिका ६ खरिपाटी नगरकोटमा पसल भएका काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकाका एक जोडी दम्पती यहाँं वस्न थालेका थिए। साथै अरु पनि एक दर्जनजसोले त्यहाँ बसेका छन्। तर अहिले त्यहाँं रहेका सबै निको भएर गएपछि बिरामीशून्य छ।
केन्द्र राख्नका लागि नेकले आफनो कार्यक्रम हल दिएको हो । बाँंकी बन्दोबस्त चाँंगुनारायण नगरपालिका र बागमती प्रदेश सरकारले गरेका हुन्।
केन्द्र संयोजनको जिम्मेवारी नेकलाई दिइएको छ । नेकले त्यसका लागि स्थानीय कर्मचारी मनोहर खनाललाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ। खनालले सुरुमा विरामीले नै खानाको व्यवस्था गर्ने भए पनि अहिले भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघले सहयोग गरेपछि त्यो पनि निःशुल्क रहेको बताए।
त्यसबाहेकका अरु सेवासुविधा निःशुल्क पाउने उनले स्पष्ट पारे ।आइसोलेसन केन्द्रको सुरक्षामा नेपाली सेना खटिएको छ।
यसअघि पनि पहिलो चरणको कोरोनाको बेला त्यहाँं वेड विस्तार गरी आइसोलेसन केन्द्र तयार गरिएको थियो । तर त्यतिवेलासम्म संक्रमणको संख्या निरन्तर कम हुँंदै गएकाले विरामी राख्नुपरेको थिएन ।
त्यसपछि प्रशासनसँंगै समन्वय गरी कलेजले बेड हटाई सामानहरु सबै स्टोरमा राखेको थियो । अहिले त्यही वेड विस्तार गरी केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो।